Manitatra ny tratra nomerika amin'ny tontolon'ny finday-voalohany, Post-Cookie | Martech Zone
Alakamisy, Jona 25, 2020 Alakamisy, Jona 25, 2020 Douglas Karr
Raha mbola mitohy mankany amin'ny telefaona finday ny fihetsiky ny mpanjifa, ny mpivarotra marika dia nanova ny fifantohany amin'ny paikadim-barotra amin'ny finday. Ary, satria ny mpampiasa dia mampiasa fampiharana amin'ny telefaona findainy amin'ny ankapobeny, tsy mahagaga raha ny dokam-barotra amin'ny fampiharana no mibaiko ny anjaran'ny liona amin'ny fandaniana dokambarotra finday. Mialoha ny areti-mandoza, fandaniana doka amin'ny finday dia hita fa nitombo 20 isan-jato tamin'ny taona 2020, hoy i eMarketer.
Saingy amin'ny olona maro mampiasa fitaovana marobe sy mandany haino aman-jery amin'ny fomba maro samihafa, voaporofo fa manahirana ny mpivarotra ny mahatakatra ny mombamomba ny mpanjifa manerana ny tontolony nomerika iray manontolo. Ny cookies avy any an-kafa dia fomba fanao voalohany ifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fantsona sosialy sy nomerika; na izany aza, ny cookies dia niharan'ny fameperana mihombo avy amin'ireo mpamatsy navigateur lehibe toa ny Google, Apple ary Mozilla. Ary nanambara i Google fa hanafoana ny cookies an'ny antoko fahatelo ao Chrome amin'ny 2022.
ID momba ny dokambarotra finday
Rehefa mikaroka fomba hafa ny mpivarotra marika hamantarana ireo mpanjifa amin'ny tontolon'ny cookie aorian'ny cookie, dia navadiky ny mpivarotra ankehitriny ny paikadiny nomerika ID dokambarotra finday (MAID) mampifandray ny fitondran-tenan'ny mpanjifa amin'ny fitaovana rehetra. Ny MAID dia mpamaritra tokana natokana ho an'ny fitaovana finday rehetra ary ny fampifangaroana ny MAID misy toetra lehibe toy ny taona, ny lahy sy ny vavy, ny vola miditra, sns. Dia ny fomba ahafahan'ny mpanao dokam-barotra manolotra votoaty misy ifandraisany amina fitaovana maro - ny famaritana ny marketing omnichannel nomerika.
Ny angon-drakitra nentim-paharazana nentim-paharazana izay iankinan'ny mpivarotra toy ny nomeraon-telefaona, adiresy, sns. Ny famahana ny maha-izy anao dia manampy amin'ny famenoana ity banga ity ary mampiasa algorithma sarotra hamaritana raha toa ka olona iray ihany ny marika famantarana ny tena maha izy azy. Ireo orinasa toa ny manam-pahaizana momba ny fitantanana ny mombamomba ny mpanjifa Infutor dia manangana ireo karazan-tserasera sy amin'ny Internet. Infutor dia manangona tahirin-kevitry ny mpanjifa mifanaraka amin'ny tsiambaratelo, miaraka amin'ny angona avy amin'ny loharano tsy mitovy toa ny fiainana fahatelo, ny data sy ny angona CRM an'ny antoko voalohany, ary manangona azy ho lasa mombamomba ny mpanjifa.
Mampahafantatra ny totalin'ny doka finday avy amin'ny Infutor
Vahaolana ID an'ny totalin'ny finday an'ny Infutor dia fomba iray tena ilaina hanampiana ireo mpivarotra hameno ny elanelana aorinan'ny cookie amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo ID dokambarotra tsy fantatra anarana, tsy PII amin'ny adiresy mailaka misy soroka. Izany dia ahafahan'ny mpivarotra manangana mombamomba ny fiainana mifanaraka amin'ny tsiambaratelo ary manome toky fa tonga any amin'ireo tompona fitaovana tadiaviny izy ireo.
Powered by ny TrueSourceTM Tabilao fitaovana nomerika, ID an'ny totalin'ny finday an'ny Infutor dia misy fidirana amin'ireo fitaovana nomerika 350 tapitrisa sy mpivady mailaka MAID / hashed 2 miliara. Ity adiresy Mobile Ad ID ity ary nandefa mailaka (MD5, SHA1, ary SHA256) dia mifanaraka amin'ny tsiambaratelo, nahazoana alalana. Ireo mpamantatra anarana tsy fantatra anarana ireo dia miaro ny fampahalalana azo fantarina (PII) sady manampy ireo mpivarotra hamaha sy hampifandray ireo mombamomba ny mpanjifa niomerika amin'ny sehatra rehetra sy ao anatin'ny sary famantarana ny antoko voalohany.
Karatra totalin'ny dokambarotra an'ny Infutor Ny vahaolana dia manome fiarovana ho an'ny mpivarotra ary fidirana eo noho eo amin'ny famahana haingana ny maha-izy azy. Ny vahaolana dia manome refy hafa data izay manitatra ny fahazoan'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny famantarana ny nomerika sy ny fivezivezena amin'ny alalàn'ny fifehezana ny PII antoko voalohany. Izany dia ahafahana mandefa hafatra omnichannel tsy miova amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fizarazaran'ireo mpihaino sy ny fanatokana ho an'ny traikefa mpanjifa misy dikany.
Diovina tanteraka ny angona totalin'ny doka amin'ny alàlan'ny finday ary azo avy amin'ny fampiharana alalana amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao marim-pototra, miantoka ny kalitaon'ny data nomerika avo indrindra. Ny isa fahatokisana (1-5) dia mampiasa algorithm tompony amin'ny alàlan'ny anton-javatra toy ny fahita matetika sy ny fahatsiarovan'ny tsiroaroa MAID / hash izay jerena miaraka, ankoatry ny syntax sy fanamarinana hafa mba hahafantaran'ny mpivarotra ny mety hisian'ny mpivady miasa.
Mametraka ny data MAID mba hiasa
Ny sehatra fifanakalozana data BDEX dia manangona tahirin-kevitra avy amina loharano maro ary manadio azy io amin'ny fomba henjana mba hahazoana antoka ny maha-marina sy ny sandan'ny mari-panondroany. Ny BDEX Identity Graph dia mampiseho famantarana data mihoatra ny trillion tapitrisa ary manome fahefana ny mpivarotra hamantatra ny mpanjifa ao ambadiky ny signal data.
Miara-miasa amin'ny Infutor, BDEX nampiditra ny angon-drakitra vahaolana Total MAID tao amin'ny fifanakalozana data. Izany dia nampitombo ny habetsaky ny angona nomerika BDEX hanomezana marika sy mpivarotra ny fidirana amin'ny famoriam-bola feno Mpirotsaka mailaka MAID / hashed. Vokatr'izany, BDEX dia nanamafy ny angona nomerika azony atolotra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampitomboana betsaka ny isan'ny doka finday sy ny adiresy mailaka eo amin'izao rehetra izao.
Ao anatin'ny tontolon'ny data izay mitady fomba hafa hanatanterahana ny tanjona dizitaly miorina amin'ny cookie, dia maharitra ara-potoana ny fiaraha-miasa BDEX-Infutor. Ny fifanakalozam-baovaonay dia natsangana hanomezana hery ny fifandraisan'olombelona ary ny Infutor's Total Mobile Ad ID Solution dia fanampin-kery lehibe hanampiana anay hanefa io filan'ny tsena mitombo haingana io.
David Finkelstein, CEO an'ny BDEX
Access to Karatra totalin'ny dokambarotra an'ny Infutor vahaolana, atolotra an-toerana ary misy amin'ny hatetika fanaterana marobe, dia fandresena ho an'ireo mpivarotra mitady ny angon-drakitra famahana ny mombamomba azy sy feno indrindra ankehitriny. Mampiasa an'io angona finday manankarena io ireo mpivarotra mba hanitarana ny tratrany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mombamomba nomerika hitodihana ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny finday, hamoronana fandefasan-kafatra omnichannel tsy miova, hanatsara ny taham-pivoarana ho an'ny kendrena nomerika sy fandaharana ary hanome hery ny fampifandraisana ny fitaovana sy ny famahana ny maha-izy azy.
Ao anatin'ny finday-voalohany, Lahatsoratra-mofomamy izao tontolo izao, ireo mpivarotra dizitaly mahomby indrindra dia mampiasa angon-drakitra sy ny famahana ny maha-izy azy mba hanomezana fitohizan'ny fitaovana sy ny traikefa manokana tadiavin'ny mpanjifa. Robust MAIDs data dia manakiana ny fanatsarana ny famahana ny mombamomba sy ny fananganana mombamomba ny ivelan'ny Internet amin'ny toerana aorinan'ny cookie ary manome ny tsy fitoviana ilaina manatsara ny taham-panovana ary mampitombo ny ROI amin'ny fandaniana marketing dizitaly.
Vakio bebe kokoa momba ny Infutor's Total Mobile Ad ID Solution
Tags: id dokaBDEXmofomamy-tsyID ID an'ny finday totalin'ny Infutormpiasa an-tranompiasa an-tranofanondroana doka findayid doka findayfinday-voalohanyon-faritryKaonty doka finday manontolo
Fomba dimy an'ny orinasa martech milalao lalao lava omena tombony 28% amin'ny fandaniana amin'ny marketing